🥇 ▷ Raadi kuwa raadinta, khariidadda iyo sahaminta godadka dayaxa ✅
Raadi kuwa raadinta, khariidadda iyo sahaminta godadka dayaxa
Sanadkii 2017, Baadhitaankii Jabbuuti ee Selene ayaa ka helay god dayax madoobaad leh oo ku yaal gobolka Marius Hills, oo ka kooban marin 50-mitir u dheer oo u horseedaya 500-kilomitir, iyo 100-mitir ballac dhulka hoostiisa ah.
Tan iyo markaas, su’aasha weyn ee soo ifbaxday waxay ahayd in qaababka noocan oo kale ahi ay ku habboonaan doonaan dejinta hawlgallada joogtada ah ee ciidda dayaxa. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, Wakaaladda Hawada Yurub (ESA) waxay raadineysaa nidaam soo hel, khariidado, iyo ka caawiya sahaminta godadka dayaxa.
Dusha sare ee dayaxa ayaa si wanaagsan loo diiwaangeliyay tan iyo xiliyadii ugu horreeyay ee meelihii ugu dambeeyay 1960-yadii. Wixii ku hoos jira, si kastaba ha noqotee, wali waa la qarin. Aagagga foolkaane ee loogu yeero badaha Dayaxa, cilmiga cilmiga noolaha ayaa cadeeyay ceelal (laga yaabee inay ka yimaadeen burburka lava hoosta ka soo qulqulaya dusha dayaxa) ee loo yaqaan tuubooyinka lava.
Fikradda farshaxanimada ah ee ay xeradu u ekaan doonto ciid daari ah, oo laga dhisay harooyin buluug ah (Isha: ESA / War Saxaafadeed)
Khariidaynta iyo sahaminta tuubooyinkaasi waxay ina siinaysaa fahan dheeri ah oo ku saabsan cilmiga juqraafiyeed ee dayaxa, waxayna u saamaxaysaa inay u noqdaan xulasho hoy oo xiiso u leh hawlgallada joogtada ah ee mustaqbalka. Tuubooyinka Lava waxay ka ilaalin karaan cillad-yareyaasha shucaaca shucaaca iyo maaddada loo yaqaan ‘microrometeorites’, iyo, suurtagalna inay noqdaan marin u hel biyo qabow iyo agabyo kale oo ku go’naa dhulka hoostiisa, “ayuu sharraxay agaasimaha Pangea, oo ah koorso ESA ah oo loogu talagalay in lagu tababaro cir-baxayaasha cilmiga bayoolajiga, Franceso Sauro.
Hoyga waxaa dheer, xiriirku waa muhiim
Hawlgallada si loo dejiyo dayaxa, waxaad u baahan tahay fikrado ku saabsan kaabayaasha lagu dhiso iyadoo la adeegsanayo godadkaan dayaxa ah. Awooda ka sokow khariidadaha godadka, waxaad ubaahantahay inaad ka fakartid qaabab aad kuhesho uguna dhex mari karto godadka. Intaa waxaa u dheer, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la geeyo qadka isgaarsiinta bannaanka, iyo sidoo kale in la rakibo dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah daraasadda sayniska ee deegaanka dhulka hoostiisa.
Mashaariicda waxaa lagu bixin karaa ESA iyada oo loo sii marinayo Madal Furan Innovation Platform (OSIP). Waxay u furan tahay labadaba aqoonyahannada iyo shirkadaha doonaya inay la shaqeeyaan khabiiro hay’ad takhasus leh.